Cliff House Ukuhlala Ngempelasonto - Umagazini Design
Ukuhlala Ngempelasonto Leli khabethe lokudoba elinokubukwa kwentaba, osebeni lomfula i-Heaven River ('Tenkawa' ngesiJapan). Kwenziwe ngokhonkolo oqinisiwe, ukwakheka kuyishubhu elilula, amamitha ayisithupha ubude. Ukuphela komgwaqo kwe -hubhu kukhubazekile futhi kuboshwe ngokujulile emhlabathini, kuze kube yilapho ifinyelela phezulu isuka ebhange ibambelele emanzini. Umklamo ulula, ingaphakathi libanzi, futhi indawo emifula yomfula ivulekele isibhakabhaka, izintaba nomfula. Akhiwe ngaphansi komgwaqo, kuphela ophahleni lwekhabethe abonakalayo, kusukela eceleni komgwaqo, ngakho-ke ukwakhiwa akuvimbi ukubukwa.
Igama lephrojekthi : Cliff House, Igama labaklami : Masato Sekiya, Igama leklayenti : PLANET Creations Sekiya Masato Architecture Design Office.
Ukuhlala Ngempelasonto Masato Sekiya Cliff House